आजदेखि रेल सञ्चालन, कति छ भाडा ? - Nepalese Times
आजदेखि रेल सञ्चालन, कति छ भाडा ?
Nepalese Times April 3, 2022 (1 Month ago) 889 Views
काठमाडौं । भारतको हैदरावाद हाउसबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र समकक्षी नरेन्द्र मोदीले आज (शनिबार) भर्चुअल माध्यमबाट संयुक्त उद्घाटन गरेसँगै जनकपुर–जयनगर रेल सेवा सञ्चालनमा आउने भएको छ ।
करिब डेढ वर्षअघि भारतबाट झन्डै १ अर्ब खर्चिएर ल्याइएको रेल सञ्चालनका लागि आज साइत जुरेको हो । अघिल्लो सरकारले नै रेल सञ्चालनका लागि विभिन्न समयमा मिति तय गर्दै आए पनि कानुनदेखि जनशक्ति र भौतिक पूर्वाधारको अभावमा सञ्चालनमा आउन सकेको थिएन ।
प्रधानमन्त्री देउवा तीनदिने भारत भ्रमणमा रहेको मौकामा आज उनी समकक्षी मोदीले संयुक्त रूपमा रेल सेवाका उद्घाटन गर्न लागेका हुन् । रेल्वे विभागका महाप्रबन्धक निरञ्जन झाले रेल उदघाटनका लागि सबै तयारी पूरा भएको बताएका छन् । रेलको उद्घाटनसँगै सञ्चालनमा आउने उनले बताएका छन् । आज हैदरावाद हाउसबाट भर्चुअल माध्यमबाट हुने उद्घाटन जनकपुरमा ठूलो स्क्रिन जडान गरेर हेरिने भएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणु यादवले शुक्रबार जनकपुरधाम रेल्वे स्टेसनको अनुगमन गरेकी छन् । नेपालको कुर्थादेखि भारतको जयनगरसम्म ३५ किलोमिटर रेल सञ्चालन हुन लागेको छ । दैनिक दुईपटक रेल जयनगरबाट कुर्थासम्म सञ्चालन हुने महाप्रबन्धक झाले बताएका छन् ।
रेलको उद्घाटनपछि जनकपुरधामबाट कुर्था जान सामान्य कोचमा २० रुपैयाँ र एसी कोचमा १ सय रुपैयाँ भाडा निर्धारण गरिएको छ । इनरुवासम्मका लागि भने सामान्य कोचमा ६० रुपैयाँ र एसी कोचमा ३ सय रुपैयाँ तथा जयनगरका लागि सामान्य कोचमा ७० रुपैयाँ र एसी कोचमा ३ सय ५० रुपैयाँ भाडा दर तोकिएको जनाइएको छ ।
दुई देशीय यात्रा भएका कारण दुवै देशका नागरिकलाई रेल चढ्न पहिचान खुल्ने प्रमाणपत्र बोक्नुपर्ने जनाइएको छ । नेपाली नागरिकलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र, पासपोर्ट या मतदाता परिचयपत्र अनिवार्य बोक्नुपर्नेछ । भारतीय नागरिकले पनि पहिचान खुल्ने परिचयपत्र बोक्नुपर्ने जनाइएको छ ।
यसअघि, रेल सञ्चालनका लागि १ फागुनदेखि नै ड्राई रन सुरु गरिएको थियो । सरकारले उद्घाटन गरेर रेल सञ्चालनको तयारी गर्दै गर्दा अध्यादेश नै निष्क्रिय बनेपछि कानुन अभावमा उद्घाटनको काम ढिलाइ हुन पुगेको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले संसद् अवरोध गरेका कारण विधेयक प्रक्रिया पनि अघि बढ्न सकेन । संसद् अधिवेशन अन्त्य भएसँगै सरकारले पुनः अध्यादेश ल्याएपछि अब भने रेल सञ्चालनका लागि कानुनी बाटो खुलेको हो ।
१६ महिनाअघि रेलका दुईवटा सेट ३ असोज २०७७ मा भारतबाट ल्याइएको थियो । रेलको ड्राई रन सुरु गर्नुअघि धनुषाको इनरुवास्थित रेल्वे स्टेसनमा एक वर्ष बढी समय पालले छोपेर रेल राखिँदै आएको थियो ।
सन् २०१४ देखि बन्द रहेको नेपालको एक मात्र रेलमार्ग पुनः सुरु गर्न लागिएको हो । यो रेलमार्गमा २०७५ पुसमै रेल सञ्चालन गर्ने घोषणा सरकारले गरेको थियो । राजधानी दैनिकबाट